Liverpool Oo Dib Usoo Ceshanaysa Suso Hadii Ay Waayaan Philippe Coutinho - Ceelhuur.com | Ceelhuur.com
Home » Ciyaaraha » Liverpool Oo Dib Usoo Ceshanaysa Suso Hadii Ay Waayaan Philippe Coutinho Date :November 13, 2017 Author :Hafsa Haji 3 views
Liverpool Oo Dib Usoo Ceshanaysa Suso Hadii Ay Waayaan Philippe Coutinho
Liverpool ayaa lagu soo waramayaa inay ka fiirsaneyso inay ku soo laabato xiddiga qadka dhexe Suso haddii ay waayaan Philippe Coutinho inta lagu jiro suuqa kala iibsiga bisha Janaayo.
Coutinho ayaa dalbaday codsi ah in kooxda laga diro intii lagu jiray suuqa kala iibsiga xagaagan, laakiin Liverpool ayaa diiday , iyagoo iska diiday seddex lacag oo weyn oo ay ku soo dalbatay kooxda Barcelona kubadsameeyaha reer Brazil.
Paris Saint-Germain ayaa la fahamsan yahay in ay ku biirtay tartanka Coutinho, labada kooxood ayaana rajeynaya inay dib u cusbooneysiiyaan dadaalkooda ku aadan saxiixa marka suuqa kala iibsiga furmo.
Liverpool ayaa weli go’aansan inay iska iibiso mid ka mid ah ciyaartoydeeda muhiimka u ah, laakiin Daily Star ayaa sheegeysa inay fiirinayaan bedelka suurtagalnimada hadii ay dhacdo in la diro Coutinho waxay soo qaadan doonaan Suso.
23 jirkaan ayaa AC Milan uga soo biiray Liverpool sannadkii 2015, waxaana uu udhaliyay 13 gool 63 kulan oo uu u saftay kooxda Talyaaniga, oo uu ku jiro lix gool 18 kulan oo uu saftay xilli ciyaareedkan.
Suso ayaa qandaraaskiisa lagu burburin karaa 35 milyan oo ginni, taasoo laga yaabo inuu Liverpool ku biiro dalab lacageed oo ay ka helayaan qaar ka mid ah lacagta ay ka helayaan Coutinho.
Cadaado oo aan Caawa laga seexan.... Xogtii ugu dambeysay...
Cadaado oo aan Caawa laga seexan…. Xogtii ugu dambeysay…